Best Quartz Ceramic Crucible Mugadziri uye Fekitori | SICER
Kushanda Tembiricha 1650 ℃
Chimiro Chikwere, Pipe, nezvimwe
Alumina imhando yecheramic zvinhu zvine yakanyanya kudziya conduction, yakanyanya abrasion resisttance, inomanikidza simba, yakanyanya tembiricha kuramba uye uye yekupisa kuvhunduka resistacne. Ichowo suitalbe zvinhu zvekushandisa muchoto mu crucible, iri mutengo wakaderera uchienzaniswa nemamwe mafirakisi.
Kune mhando mbiri dzezvinhu zveSICER Crucible, Alumina neZirconia.
Nekwakasimba kupokana nekupisa kwekushisa, ngura, uye coefficient yekupisa kwekuwedzera, anoshandiswa zvakanyanya kune iyo yekunyungudutsa maitiro.
Alumina Kukuru Mukutonga kwechiFascist ane akanaka asidhi uye alkali nemishonga uye zvakakodzera kuti utsotso chiwanikwa uye Stainless simbi. The kunonyanyisa vanoshanda tembiricha anogona kusvika 1600 ℃
Zirconia Kukuru Mukutonga kwechiFascist ane rakaisvonaka nemishonga asidhi slag, uye anoshandiswa nevakawanda kuti simbi kubva Super chiwanikwa uye vanokudzwa simbi, uye Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri uchishandisa tembiricha iri kubva 1980 kusvika 2100 ℃.
Aluminium oxide crucible inoshandiswa zvakanyanya mukushandisa kunotevera:
Inoshandiswa kugadzira zvikamu zveCVD, ion implants, photolithography, uye semiconductor zvikamu.
Inoshandiswa pamavira emagetsi indasitiri nekuda kwekugona kwayo kushanda pasi pekupisa kwakanyanya.
Inoshandiswa semudziviriri weakanyanya kupisa tembiricha vakaroora.
Inoshandiswa pamakemikari indasitiri ine yakakwira ngura resisttance.
• Kuwedzera kwekushisa kwakadzika
• Kugadzikana kwakanaka kwemakemikari
• Yakaderera huwandu hwakawanda
• Kuramba kugirazi kunyauka ngura
• Yakadzika porosity uye yakanaka pamusoro inowedzera kuchenesa
• Yakakura michini simba uye kupfeka resisttance
• Yakanaka makemikari kuramba maacids nevamwe
• Inoenderana mativi kutonga
Pashure: Corundum-mullite Chute
Zvadaro: Sicer - Ceramic Liner yeMad Pump
Ceramic Kukuru Mukutonga kwechiFascist